Ho Fahatsiarovana an’i Paulina Aguilera, Mpanoratry ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2011 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, srpski, Aymara, English
Ny vaovao dia tonga tamin'ny endrika mailaka avy amin'ny rahavavikeliny : Paulina Aguilera Muñoz, mpanoratra ho an'ny Global Voices avy any Chile, dia nodimandry tampoka.
Amin'ny maha-mpamoaka ny lahatsoratry ny Global Voices aty amin'ny faritra Amerika Latina ahy dia nisy fotoana nifaneraserako tamin'i Paulina ny andro talohan'izay, niasa momba ny lahatsoratra iray mikasika mpitoraka bilaogy iray voatazona any Ekoatora noho ny fiampangana azy ho naniratrira Lehiben'ny Fampanoavana. Nanohina sy nahavaky fo ny vondrom-piarahamonina Global Voices ny fahalasanany.
Mpanao gazety matihanina ary niteraka roa izy, i Paulina dia niasa tao Chile, Nicaragua, Ekoatora ary Kolombia momba ny olan'ny fampandrosoana, ny zon'olombelona, ny fahasamihafan'ny lahy sy ny vavy ary ny fifandraisana. Nitoraka bilaogy izy, amin'ny teny Espaniola, tao amin'ny Varios Mundos Para Vagabundos/as (Tontolo Miovaovan'ny Mpirenireny) sy ny Kanguro: Turismo Seguro y Barato (Kanguro: Fizahantany Azo Antoka sy Tsy Lafo).
Paulina dia nanomboka nanoratra ho an'ny Global Voices tamin'ny Septambra 2010.
Tsy voaisa ireo hafatra fiaraha-miory sy fanehoam-pitiavana voaray vantany vao nozaraiko tao amin'ny lisitry ny mailaky ny vondrom-piarahamonintsika ny vaovao. Nanerana an'i Amerika Latina manontolo, eny fa hatrany lavitra tany India, Serbia, Korea Atsimo, Soeda, Bahrain, Maldiva, Peru, Tanzania, Okraina, Tonizia, Frantsa, Pakistana, Etazonia, banga ny fisiany fa kosa tadidin'ireo namany .
Solana Larsen, Mpandrindra ny Famoahan-dahatsoratry ny Global Voices, nanasongadina lahatsoratra iray [es], dia nanoratra hoe: “Tsaroako ery izy, ilay olona miran'endrika sy mahatsikaiky ao amin'ny lisitry ny mailaka, sy tahaka ny mpitoraka bilaogy mavitrika ary feno hery amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny zon'ireo olona indizena tompon-tany,” Paulina dia nanoratra tao amin'ny bilaoginy manokana ho an'ny Blog Action Day (Andro ho an'ny Hetsika Fitorahana Bilaogy), ka tao anatin'izay izy no nanoratra mikasika ny maha-zon'ireo vahoaka indizenara ny madio.
Felipe Cordero, mpanoratra Chilean, dia nilaza fa tena nidera ny fanolorantenan'i Paulina tamin'ny fandrakofana ny olana momba ny zon'olombelona ao Chile sy Amerika Latina ho an'ny Global Voices izy. Firuzeh Shokooh Valle, Mpamoaka Lahatsoratra amin'ny teny Espaniola eto amintsika, dia nahatsiaro ny fankafizany manokana ny lahatsoratr'i Paulina mikasika ny Natividad Llanquileo, mpitondra tenin'ireo indizena ho an'ny Mapuche momba ny fitokonana iray tsy hihinan-kanina tao Chile. Ela Stapley, mpandika lahatsoratry ny Global Voices, dia nanamarika ny fandrakofan'i Paulina ny firehetan'ny fonja tao Chile: “Tiako ity lahatsoratra ity noho izy miresaka indrindra ny olona izay inian'ny fiarahamonina hadinoina. Tamin'ny nanoratany an'io dia nampahatsiahy antsika koa izy fa na ny gadra aza dia mba olona ihany koa. “
Paulina dia mpiara-miasa isan'ny andry tamin'ny fandrakofana ny fitokonan'ny polisy tao Ekoatora tamin'ny 30 Septambra 2010. Ny asa nataony niaraka tamin'i Milton Ramirez, mpanoratra Ekoatoriana, dia nanampy antsika nananganana pejy Fandrakofana Manokana an'ilay fitokonana.
Ny fanolorantenany, ny maha-matihanina, ny fientanentanany ary ny fahalinany dia samy fahabangana lehibe ho antsika eto amin'ny Global Voices. Izaho dia mahatsiaro azy manokana ho ilay vehivavy sady namana fàkana tàhaka. Mandefa ny fiaraha-miory avy aminay izahay ho an'izy mirahavavy zanany, ny ray sy reniny, ny rahavaviny, ny namany ary ireo rehetra izay, tahaka anay, nahazo voninahitra tamin'ny fiarahana tamin'i Paulina.